Compression Spring Compression Spring မှထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်ထုတ်လုပ်ခြင်း, ထောက်ပံ့ရေးနှင့်ပို့ကုန်အတွက်အသက်ရှည်သမျှလူတန်းစားပေါင်းစုံလူကြိုက်များ Taiwan။ အင်အားကြီးဖြန့်ဖြူးကွန်ယက်နှင့်လိမ္မာအလုပ်ရှင်များမှကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Compression Spring ထုတ်ကုန်အရည်အသွေးအကောင်းဆုံးနှင့်အမြင့်ဆုံးစျေးနှုန်းအပြိုင်အဆိုင်ရှိသည်။ အခမဲ့ခံစားရ ကျေးဇူးပြု. ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ.
ပုံစံ - 6-4
Compression springs တွေကို Europe နဲ့ United States ကို တင်ပို့ပါတယ်။
2mm compression spring,အလိုအလျောက်ပုံသွင်းစက်ထုတ်လုပ်မှု
Order အရေအတွက်အလိုက် ငွေပေးချေမှု စည်းကမ်းချက်များကို ညှိနှိုင်းနိုင်ပါသည်။
အလိုအလျောက်ပုံသွင်းခြင်း။,ရွေးချယ်မှုအတွက် အမျိုးမျိုးသော မျက်နှာပြင်ကုသမှုများနှင့် passivation ကုသမှုများကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်ပါသည်။,အမြန်ပို့ဆောင်ခြင်း။,တည်ငြိမ်သောအရည်အသွေး
ထိုင်ဝမ်မှ China Steel ပစ္စည်းများ တိုက်ရိုက်ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါသည်။,လုံလောက်သောထောက်ပံ့မှု,အရည်အသွေးကောင်းခြင်းအာမခံချက်
ISO900001 TS16949 လက်မှတ်
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.stampingparts.org/my/compression-spring.html
အကောင်းဆုံး Compression Spring ကိုရှာဖွေရန်နှင့် ၀ ယ်ရန်အတွက်သင်သည် Compression Spring မှထုတ်လုပ်သော၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊ Taiwan ရှိစက်ရုံတစ်ရုံ